मुक्तक दोहोरी [पोखरा छोड्दै गर्दा] – A mélange, as LIFE is
बन्द थियो मनको ढोका, आई, खोली, आफैँ पसि
हुँदाहुँदै डेरा जमाई, सधैँ आफ्नै सुर कसि ……
हेर्नुहोस् न अहिले आएर कस्तो दोधार भयो भने
आफ्नो हिँड्ने बेला भयो, ऊ चाहिँ यतैतिर बसी !!
बन्द अनि एक्लो मनलाई, सुन्दर बनाकी हुँ ..
अप्ठ्यारो र अँध्यारोमा, हात समाकी हुँ …..
गहभरी आँशु बोकी ओठमा हाँसो देखाउँदै
नचाहेरै बिदाइका, हात हल्लाकी हुँ …..!!
सम्झिएर आउने दिन, न त खाना खान सक्छु ।
जागिर छैन, ब्यापार छैन, न त संगै लान सक्छु ।
कस्ता मोड आउँदा रै’छन् जिन्दगीमा कहिलेकाहिँ
तिमीलाई एक्लै यता, छोडी न त जान सक्छु ।।
मौका देऊ हाम्रो सुन्दर, घरबार बनाउनेछु ।
तिम्रो सुन्दर सपनालाई, साकार बनाउनेछु ।
मैले पनि सुख चैन, कहाँ खोज्ने छु र ??
तिम्रो न्यानो अंगालोलाई, दरबार बनाउनेछु ।
सपनाको सँगालोले, सधैँ जीवन चल्छ होला ?
स्याउलाको बङ्गलाले, सधैँ जीवन चल्छ होला ?
भूकम्पले भत्काई गयो बस्ने पक्का घर’नि छैन
मात्रै तिम्रो अँगालोले, सधैँ जीवन चल्छ होला ?
पैसा मात्र रोज्छौ भने, मलाई नरोज भो !
यति स्वार्थी रै’छौ आखिर मलाई नखोज भो !
तिम्रो लागि सब्बै पीडा खप्न सक्ने भा’की थिएँ ..
सुख, महल सोच्छौ भने, मलाई नसोच भो !!
ठिकै त हो बिहान हुन, पहिला रात पर्नुपर्छ…
त्यो प्रिय वसन्त आउन, प्रत्येक पात झर्नुपर्छ..
नरिसाउ न ! जागिर खाउँला, घर बनाउँला, अनि तिमीलाई लिन आउँला
अनि नयाँ जिन्दगीको, सुरुवात गर्नुपर्छ …!!!
[ पोखरा छोडेर हिड्दै गर्दा, प्रेमीकालाई पनि छोड्नुपरेको कल्पना गर्दै आदित्य आचार्य ले लेखेको मुक्तकमा गणेश पुरी ले प्रेमीका बनेर लेखेका मुक्तक, दोहोरीको रुपमा प्रस्तुत गरिएको हो ]